Milaza i Amazon fa TSIA amin'ny Storage Cloud tsy voafetra | Vaovao momba ny gadget
Mpampiasa bebe kokoa isika izay, na amin'ny lafiny manokana na amin'ny matihanina, dia mitahiry ny angon-drakitra, antontan-taratasy, sary, horonan-tsary ao anaty rahona mba hahafahan'izy ireo misy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fitaovana hafa, raha mbola manana fifandraisana Internet isika, mazava ho azy . Ary ankehitriny fa miparitaka tsikelikely ity rahona ity, manomboka manazava azy ireo ny mpamatsy: Fitehirizana tsy voafetra? Tsy misy na inona na inona momba izany!
Ny farany nandray ny dingana dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra, Amazon, que rehefa avy namaky tsena miaraka amin'ny taha hatramin'ny folo heny ambany noho ny mpifaninana aminy, nipoaka ny freins ary ampy hoy izy!
Fitehirizana rahona tsy voafetra? Na amin'ny nofinao tsara indrindra
Ilay goavambe Amazon dia nanjary serivisy fitehirizana rahona ho an'ny tahirin-kevitra marobe toy ny, ohatra, ny serivisy fitehirizam-bokin'ny rahona Plex, izay mamela (mamela) ny mpampiasa azy hitahiry mozika sy horonan-tsary tsy voafetra ao anaty rahona hankafy azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Ary ahoana no nanaovany an'izany? Tsotra, fandefasana tolo-kevitra feno faniriana feno hetaheta izay nanolotra fitehirizana tsy voafetra sy mora, ho an'ny ampahafolon'ny tolotra tsara indrindra amin'ny fifaninanana.
Saingy ankehitriny ny fitahirizana rahona dia mitombo haingana, ary lasa Amazon ny benchmark ao amin'ity sehatra ity, toa tsy dia zava-dehibe loatra intsony ny fametrahana fetra. Ary amin'ity lafiny ity, Nanaraka ny dian'ny Microsoft i Amazon, orinasa izay efa nametra ny serivisy OneDrive ho 1TB isaky ny mpampiasa hatramin'ny Novambra 2015 ary, avy eo, saika safidy à la carte.
izay voambara Ny tahiry rahona an'ny Amazon dia nihena ho tolotra roa:
100GB amin'ny $ 11,99 / taona.
1 TB $ 60 isan-taona (io no tsy voafetra).
Avy eo, ny mpampiasa dia afaka manao fifanarahana hatramin'ny TB faha-3 fanampiny amin'ny sandan'ny $ 60 / TB.
Tadidio fa raha mihoatra ny iray amin'ireto drafitra vaovao ireto ianao ary tsy te hanitatra, manana 180 andro ianao hampidinana ny rakitrao rehetra ary tsy hahavery azy ireo.
Raha ny sary, Ireo mpampiasa prime dia hitazona fitehirizana tsy voafetra ho an'ny sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Nilaza i Amazon fa TSIA amin'ny fitehirizana rahona tsy voafetra
Ahoana ny fomba hanakatonana haingana sy haingana ny tranga rehetra ao anaty Windows